विश्वकप फुटबल: तपाई रसियाको कि साउदीको समर्थक ? — Harpraharnews.com
रसियाको खेलमैदानमा आजबाट विश्वकप फुटबलको सुभारम्भ हुँदैछ । शुरुवाती खेल नेपाली समय अनुसार राति ८ः४५ बजे समूह ‘ए’ अन्तर्गतका रसिया र साउदी अरेबियावीच हुँदैछ । आम नेपाली दर्शकहरुमा चर्चा छ- तपाई कता पट्टी लाग्ने ? रसिया कि साउदी ?
विश्वकपमा कुन टीमको समर्थक बन्ने भन्ने विषय निकै नै अप्ठ्यारो छनोटको विषय हो । वृद्धदेखि वालकसम्म सबैले ‘म त फलाना टीमको समर्थक हुँ’ भन्न थालिसकेको अवस्थामा तपाई हामीमा पनि कोही न कोही टीमको समर्थक बन्न दबाव परिरहेकै छ ।
काठमाडौंको गल्लीमा यतिबेला अर्जेटिनाको जर्सी लगाएर हिँड्नेहरुको संख्या बढेको छ । त्यसैगरी ब्राजिलको पहेंलो जर्सी अनि जर्मनीको सेतो जर्सी पनि देखिइरहेका छन् । गल्ली गल्ली चोक चोकमा यो टीम र त्यो टीम भन्दै नेपालीहरुवीच भनाभन सुरु भ ईरहेको छ ।
आखिर के आधारमा नेपालीहरुले अर्जेन्टिना, जर्मनी, ब्राजिल वा अन्य कुनैपनि टीमको पक्ष लिन्छन् ? यसको छनोटको आधार के हो ? के यसमा विशुद्ध खेलको सौन्दर्यले मात्रै काम गरेको छ कि अरु पनि राजनीतिक वा भावनात्मक पक्ष जोडिएको छ ? यो प्रश्न निकै नै रोचक छ ।
टीम छनोट गर्ने केही आधारहरु
विश्वकपमा कुन टीमको पक्ष लिने भन्ने छनोटका पछाडि केही तर्कहरु पाइन्छन् । जस्तो कि धेरैले अर्जेन्टिनाको पक्ष लिनुका पछाडि मेस्सीलाई मन पराउनु, उनको फ्यान बन्नु अनि अर्जेन्टिनाको खेल प्रदर्शन राम्रो हुनु पनि हो ।
त्यसैगरी रोनाल्डो, मुलर नेयमार वा अरु कसैलाई मन पराएकै आधार उनैको टीमको पक्ष लिने ट्रेन्ड पनि देखिएको छ ।
तर, एउटा खेलाडी मन पर्दै उसैको देशको टीमलाई समर्थन गरिहाल्नुपर्छ भन्ने छैन भन्नेजस्तो मान्यता राख्ने मानिसहरु पनि छन् ।
उदाहरणका लागि खेललाई राम्रोसित बुझेका राप्रपाका नेता कमल थापाले व्यक्तिगत रुपमा मेस्सी, रोनाल्डो आदिको खेल मन परेता पनि आफू जर्मनको समर्थक रहेको बताएका छन् ।
तर, विश्वकपमा टीम छनोट गर्दा फ्यान वा राम्रो खेलाडि मात्रै हेरिँदैन । कतिपयले राजनीतिक विचारधारा, जात, क्षेत्र आदिलाई पनि आधारका रुपमा लिने गरेको पाइन्छ । फुटबल आफैंमा निवर्गीय सौन्दर्य बोकेको विश्वविख्यात खेल हो । यसले संसारलाई एउटा मैदानमा जोड्छ । तर, यसलाई हेर्ने मामिलामा दर्शकहरुको चश्मा आ-आफ्नै रंगको हुने गर्छ ।
रसिया र अन्य कुनै देशवीच खेल हुँदा कम्युनिष्ट ह्याङओभर बोकेको कुनै नेपाली दर्शकले पुरानो सोभियतसंघ सम्झँदै रसियाको पक्ष लिने सम्भावना बढी हुन सक्छ । त्यस्तै कांग्रेसको छाता ओढेको दर्शकले रसियालाई छ्या भन्न पनि सक्छ । त्यस्तै दक्षिण कोरियाको टीमले खेलिरहँदा कुनै चिनियाँ दर्शकले दक्षिण कोरियाभन्दा विपक्षी टीमलाई समर्थन गर्न सक्छ ।
तर, नेपाली खेलअनुरागीहरुमा भने अचम्मको छनोट विधि छ । धेरै नेपालीहरु दक्षिण अमेरिकाजस्तो साइनो सम्बन्ध नै नरहेका मुलुकका टीमहरुप्रति बढी क्रेजी देखिन्छन् । र, यही कारणले काठमाडौं र अन्य शहरका गल्लीमा ब्राजिल र अर्जेन्टिनाका जर्सीहरु बिक्ने गर्छन् । नेपालीहरुको यो छनोटमा जातीयता वा क्षेत्रीयता भन्दा पनि विशुद्ध खेल-सौन्दर्यप्रतिको भाव झल्कन्छ ।
विश्वकप फुटबलमा दक्षिण अमेरिकी देशहरुको उपस्थिति बलियो छ । त्यससँगै बलियो उपस्थिति भनेको युरोको हो । अफि्रका विस्तारै अघि बढ्दैछ । र, एशियाको उपस्थिति त निकै नै कमजोर छ । उदाहरण यही नै पर्याप्त छ कि एशियामा आफूलाई पावरफूल ठान्ने चीन, भारत, पाकिस्तान, इण्डोनेसिया, थाइल्याण्ड, सिंगापुर कसैको पनि विश्वकप-२०१८ मा नामो निशाना छैन।
नेपालको त कुरै नगरौं । यस्तो स्थितिमा अहिलेको विश्वकपमा एशियाबाट साउदी अरेबिया, दक्षिण कोरिया, इरान, जापान र स्वयं आयोजक देश रसियाले भाग लिइरहेका छन् । तैपनि नेपाल लगायतका एशियाली देशका फुटबलप्रेमीहरु ‘आफ्नो महादेश’ भन्ने पक्षमा छैनन् । उनीहरु राम्रो एवं जित्ने टीम छनोट गर्छन् र दक्षिण अमेरिका एवं युरोपतिरै नजर लगाउँछन् ।
सडक अनुगमनका लागि पुगेका जनप्रतिनिधि र युवाहरुबीच कुटाकुट